गतिशीलता अपाability्गता छात्रवृत्ति कार्यक्रम - Karman हेल्थकेयर
२०१ Kar कार्मन हेल्थकेयर का विजेताहरु गतिशीलता अशक्तता छात्रवृत्ति घोषणा गरिएको छ। २०१ scholarship छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताहरुलाई बधाई छ र सहभागी सबैलाई धन्यवाद! २०२० छात्रवृत्ति सबमिशन अब खुला छ। सबमिशन सेप्टेम्बर १, २०२० को माध्यम बाट स्वीकार गरिनेछ।
२०१ W विजेताहरु हेर्नुहोस्
अघिल्लो छात्रवृत्ति विजेताहरु
2020 गतिशीलता अशक्तता छात्रवृत्ति
कर्मन हेल्थकेयर यो घोषणा गर्नमा गर्व छ कि हामी कलेज र विश्वविद्यालयका बिद्यार्थीहरुलाई ए छात्रवृत्ति अवसर उनीहरुलाई जीवन मा आफ्नो अन्तिम लक्ष्य सम्म पुग्न मद्दत गर्न को लागी।
हामी प्रस्ताव गर्नेछौं दुई $ 500 छात्रवृत्ति वर्तमान मा भर्ना बिद्यार्थीहरु को लागी जुन आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्दछ।
यो छात्रवृत्ति विद्यार्थीहरु लाई लागू हुन्छ जोसँग छ गतिशीलता अशक्तता, शैक्षिक रूपमा उत्कृष्ट र जो को लागी एक सम्मान छ अशक्तता अमेरिका मा चेतना।
मापदण्ड पूरा गर्ने सबै शैक्षिक आवेदकहरुलाई यस बर्षको कर्मन हेल्थकेयर छात्रवृत्ति कोष मा आफ्नो आवेदन पेश गर्न स्वागत छ।
शुभकामना र हामी आशा गर्दछौं कि तपाइँ विजेता हुनुहुन्छ!
2020, २ Theme विषयवस्तु
तपाइँको आफ्नै जीवन बाट एक अनुभव छान्नुहोस् र व्याख्या गर्नुहोस् कि यो तपाइँको विकास लाई कसरी प्रभावित गरेको छ।
२०२० छात्रवृत्ति को लागी समय सीमा छ सेप्टेम्बर 1, 2020। कृपया समय सीमा भन्दा पहिले निम्न आवश्यकताहरु सबमिट गर्नुहोस्।
सहभागी विद्यार्थीहरु निम्न मापदण्ड पूरा गर्नु पर्छ:
वर्तमान मा अमेरिका मा एक मान्यता प्राप्त कलेज वा विश्वविद्यालय मा भर्ना हुनु पर्छ
सोलह (एक्सएनएनएक्सएक्स) बर्ष वा पुराना वर्ष
एक संग सबै कलेज, र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु को लागी खुला गतिशीलता अशक्तता जो एक प्रयोग गर्दछ व्हीलचेयर, वा अन्य गतिशीलता एक नियमित आधार मा उपकरणहरु।
कम से कम 2.0 (वा समकक्ष) को संचयी ग्रेड पोइन्ट औसत (GPA) राख्नुहोस्
*त्यहाँ प्रति वर्ष प्रति छात्र एक छात्रवृत्ति को एक सीमा छ, कुनै पनि विद्यार्थी एकै बर्ष मा मात्र एक पटक छात्रवृत्ति जित्न सक्छ।
कृपया हामीलाई तल दिईएको अनुरोध अनुसार निम्न जानकारी पठाउनुहोस्। सबै कागजातहरु एक .doc, .docx, वा .pdf फाइल को रूप मा पठाउन को लागी आवश्यक छ:
कथन वा तपाइँको ग्रेड बिन्दु औसत (GPA) को ट्रान्सक्रिप्ट - अनौपचारिक ट्रान्सक्रिप्ट स्वीकार गरियो।
यस वर्षको विषयवस्तुको जवाफ दिने एउटा निबन्ध सबमिट गर्नुहोस्। यदि तपाइँ तपाइँको सबमिशन मा पत्राचार गर्दै हुनुहुन्छ, कृपया मानक आकार .8.5.५ इन्च x ११ इन्च कागज तपाइँको प्रविष्टि सबमिट गर्न को लागी प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाइँ ईमेल को माध्यम बाट तपाइँको निबंध पठाईरहनुभएको छ, यो टाइप र एक .doc, .docx, वा .pdf फाइल को रूप मा सुरक्षित हुनुपर्छ।
प्रमाण गतिशीलता अशक्तता अर्थात् डाक्टरको नोट। (एक को दैनिक उपयोग को लागी लागू हुन्छ गतिशीलता उपकरण।)
यदि तपाइँ एक विजेता को रूप मा छनौट गरीएको छ भने आफैं को एक पोर्ट्रेट छवि अनलाइन पोस्ट गरिनेछ।
त्याग: हामी मेलिंग ठेगाना पठाइएको कुनै पनी सबमिशन फिर्ता गर्न सक्षम हुनेछैनौं।
सबै सामग्री पठाउनुहोस्:
Attn: कर्मन स्वास्थ्य सेवा छात्रवृत्ति कोष
19255 सान जोस एवेन्यू
शहरको उद्योग, CA 91748
वा सबै सामग्री ईमेल गर्नुहोस्: cholaship@karmanhealthcare.com
छात्रवृत्ति भनेको के हो?
एक छात्रवृत्ति मात्र पैसा एक प्रायोजक द्वारा उपलब्ध गरीएको छ एक विद्यार्थी को शिक्षा को लागी कि तपाइँ तिर्न को लागी अपेक्षित छैन। उनीहरुलाई सामान्यतया उपलब्धि वा प्रतिस्पर्धा को आधारमा सम्मानित गरिन्छ।
के प्रवेश / नामांकन को प्रमाण को रूप मा गणना गर्दछ?
तपाइँको विश्वविद्यालय लाई सम्पर्क गरेर, उनीहरु तपाइँको कागजात प्रमाणित गर्न को लागी मद्दत गर्न सक्षम हुनेछन् (यदि तपाइँ स्नातक कलेज वा हाई स्कूल को बारे मा हुनुहुन्छ) वा नामांकन (यदि तपाइँ पहिले नै एक विश्वविद्यालय विद्यार्थी हुनुहुन्छ) - जो पनी उपयुक्त छ। उदाहरण को लागी एक समय तालिका प्रमाण को रूप मा स्वीकार गरिनेछ।
मेरो निबंध पेश गर्ने समय सीमा कहिले हो?
सेप्टेम्बर 1st। यस भन्दा पछि पेस गरिएका प्रविष्टिहरु स्वतः अस्वीकृत हुनेछन्।
कसरी कर्मन हेल्थकेयर एक विजेता छनौट गर्नेछ?
न्यायाधीशहरु एक योग्यता आधारित स्कोरिंग दृष्टिकोण को उपयोग गर्दछ कि मुख्य रूप मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ गुणस्तर तपाइँको निबंध को सामग्री र तपाइँको आवेदन को योग्यता को। निबंध अनुसन्धान, व्यक्तिगत अनुभव र राय, आलोचनात्मक र रचनात्मक सोच प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
कसरी र कहिले विजेता घोषणा गरिनेछ?
विजेता लाई फोन वा ई-मेल द्वारा सूचित गरिनेछ कि उनीहरु दुई विजेताहरु मध्ये एक हुन्। हामी उनीहरुलाई सूचित गर्न र जानकारी स gather्कलन गर्न को लागी तपाइँको स्कूल को वित्तीय सहायता विभाग लाई सम्पर्क गर्नेछौं। यो पृष्ठ पनि विजेता को विवरण संग एक पटक विजेताहरु लाई चयन गरीएको छ को साथ अपडेट गरिनेछ।
म कसरी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्छु?
हामी तपाइँको विश्वविद्यालय / कलेज मा वित्तीय सहायता / छात्रवृत्ति / बर्सर वा समकक्ष सम्पर्क मा सम्पर्क गर्नेछौं जसले हामीलाई तपाइँको स्कूल सम्बन्धित खर्च को लागी उनीहरुलाई चेक पठाउने बारे मा सूचित गर्नेछ।
मलाई अर्को प्रश्न छ। म को सम्पर्क गर्न सक्छु?
ईमेल प्रश्नहरु गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् cholaship@karmanhealthcare.com र हामी सकेसम्म चाँडो तपाईलाई फिर्ता लिनेछौं।
विश्वविद्यालयहरू भाग लिँदै
हामीलाई पालन फेसबुक, Twitter, इन्स्टाग्राम, र YouTube
Karman हेल्थकेयर को समर्थन गर्न गतिशीलता अशक्तता छात्रवृत्ति, हाम्रो उत्पादनहरु को केहि जाँच गर्नुहोस्:
अल्ट्रा हल्का व्हीलचेयर